Umkhiqizi kanye neFektri Ehamba phambili ye-IPTT-SD | IHoodland
I-IPTT-SD Series Manual Lifter
● UMax Thrust: 3000 N
● Induku ye-Aluminium
Incazelo yomkhiqizo:I-IPTT-SD Series Manual Lifters, i-compact amd enamandla (i-3000N Push), enezingxenye ezi-3 zokuphakamisa ikholomu kuze kufike ku-480mm stroke, ziklanywe ngokuqinile. Kulula ukukhweza futhi kulungele ukulungiswa kokuphakama emabhentshini okusebenzela, eziteshini zokusebenza, emadeskini nasemakhishini.
I-IPTT-SD Series Manual Lifters, zithule zihlukile kune-IPTT-DD Series Electric Lifters ezicini eziningi.
IManuwali noma ugesi - Kulo mphakathi osathuthuka ngokushesha, abanye abantu bathanda ukusebenzisa imikhiqizo kagesi ukuze kube lula, kanti abanye bakhetha ukusebenzisa ezenziwa ngezandla ngendlela yesiko. Kepha lokhu akuphazamisi ukusetshenziswa, okuncike kokuncamelayo kwakho.
Layisha Push & Pull Capacity - Okokuphakamisa kagesi, ukusunduza / ukudonsa kungu-800N (ilingana nezinto ezingama-80kg futhi cishe ama-176lbs); yama-lifters ngesandla, i-Push / donsa ingafinyelela ku-2000N (ilingana nezinto ezingama-200kg futhi icishe ibe ngama-441lbs). Uma unesidingo esikhethekile somthwalo, sizohlala sikuncoma nge-IPTT-SD.
I-Intallation Dimension - Ungahlola usayizi oningiliziwe kumadokhumenti angezansi noma uxhumane nathi ngqo, sizokuthumela uhlaka lwemidwebo yobukhulu kuwe.
Ubude be-Stroke - be-IPTT-DD, sine-IPTT-DD260, 310 kanye ne-360 (ubukhulu bohlaka oluningiliziwe sicela ubheke imibhalo engezansi); kwe-IPTT-SD, sikhiqiza i-IPTT-SD260, 285, 310 kanye ne-360. kepha nge-IPTT-DD, sine-DL, ZL ne-SL. Sicela usazise ubukhulu bokufakwa kwakho okuningiliziwe ngaphambi kokufaka ama-oda, singancoma imikhiqizo efaneleke kakhulu kuwe.
Eminyakeni edlule besisebenza, sinokuhlangenwe nakho okuningi kulo mkhakha, sinikeza amakhasimende ngempahla ephezulu nezethembekile. ILebhu yethu ifakwe imishini yokuhlola efanelekile, yonke imikhiqizo izohlolwa ngokuqinile futhi ihlolwe ngochungechunge lwezivivinyo ngokusho kokucaciswa kokusebenza kwe-canonical kanye nokujwayelekile ngaphambi kokulethwa. Kuma-oda amaningi, sithatha isaphulelo, futhi singathumela izimpahla ngezindlela eziningi ezahlukahlukene zokulethwa, njengokuhambisa, ukuthuthwa kwomoya noma ukuthuthwa kolwandle nokunye.
Uma kukhona umbuzo mayelana nokufakwa noma ukusebenzisa, sicela ungangabazi futhi uxhumane nathi, ukuthengisa kwethu nonjiniyela kuhlale kutholakala kuwe.
I-imeyili: cassie@thehoodland.com noma ifoni: +86 15726882369
Izici:● Umbala: Umhlophe ngesiliva
Olandelayo: IP42 Electric LinearActuator
I-Forage Abavuni Actuator, I-Dc 24v Linear Actuator, Electric Linear Actuator, Isilinda Actuator, I-Low Noise Linear Actuator, Double Acting eyisilinda Actuator,